Ny fitsidihana an'i Korea Avaratra dia tia mpizahatany anglisy ary mametraka mpanohana ao ambadik'izany
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » Ny fitsidihana an'i Korea Avaratra dia tia mpizahatany anglisy ary mametraka mpanohana ao ambadik'izany
Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Vaovaom-panjakana • fampiasam-bola • Vaovao farany momba ny Korea Avaratra • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • malaza ankehitriny • Vaovao farany momba ny UK
"Mitsidika an'i Korea Avaratra dia mirehareha amin'ny fanambaràna ny fanaovan-tsonia fifanarahana fanampiana miaraka amin'ny ekipa mpilalao baolina kitra anglisy Blyth Spartans FC," hoy ny lahatsoratra iray an'ny LinkedIn avy amin'ny orinasa mpizahatany miorina ao Shenzhen, Sina.
Ny mpanohana farany an'i Blyth Spartans FC dia mitsidika an'i Korea Avaratra. Blyth Spartans dia ekipa mpilalao baolina kitra anglisy. Blyth Spartans Association Football Club dia klioban'ny baolina kitra monina any Blyth, Northumberland. Mpikambana ao amin'ny National League North izy ireo ankehitriny, ny ambaratonga fahenina amin'ny baolina kitra anglisy, ary milalao ao amin'ny Croft Park /
"Mitsidika an'i Korea Avaratra dia mirehareha amin'ny fanambaràna ny fanaovan-tsonia fifanarahana fanampiana miaraka amin'ny ekipa mpilalao baolina kitra anglisy Blyth Spartans FC," hoy ny lahatsoratra iray an'ny LinkedIn avy amin'ny orinasa mpizahatany miorina ao Shenzhen, Sina. Ny fitsidihana an'i Korea Avaratra dia hasandratra ao amin'ny tranokalan'ny klioba sy ny media sosialy.
Blyth Spartans FC dia ao amin'ny tanàna misy tantaram-pitrandrahana arintany sy fanamboarana sambo ary ankehitriny ny fisian'ny turbinina miteraka herinaratra. Toa toerana tsy azo inoana ny mandefa mpitsidika any Korea Avaratra, izay mpizahatany Andrefana manodidina ny 4,000 fotsiny isan-taona. Mampitandrina ny olom-pirenena anglisy handeha any Korea Avaratra ny minisiteran'ny raharaham-bahiny UK.
Ny orinasam-pizahan-tany sinoa dia mitanisa karazana fitsangatsanganana any Korea Avaratra amin'ny tranokalany, manomboka amin'ny $ 500 ka hatramin'ny $ 2,800, miankina amin'ny halavany sy ny karazana onenana irina.
Ny vidin'ny dokam-barotra mitsidika an'i Korea Avaratra hatramin'ny $ 190, raha ny isa napetraka tao amin'ny tranonkalan'ny klioban'ny baolina kitra. Mahatsapa ny orinasam-pitaterana fa miavonavona ny karama.